Ogaden News Agency (ONA) – Muxuu ku mutaystay dhibkan loo gaystay
Muxuu ku mutaystay dhibkan loo gaystay
Posted by ONA Admin	/ November 11, 2012
Shacabka S.Ogadenia oo kamid ah shucuubta fara kutiriska ah ee wali ay dulsaarantahay heeryada gumaysiga ayaa ah kuwo ay ka muuqato diifta iyo dhibaatada uu baday gumaysigu waxaadna indhahaaga ku arkaysaa dad uu jidhkooda ka muuqdo dhibaatooyinkii loo gaystay.
Maxamad wuxuu kamid yahay dad farabadan oo ay ciidamada gumaysigu u gaysteen jidhdil ay dhibaatooyinkay u gaysteen ciidamada gumaysiga Itobiya ka muuqato jidhkooda.
Hadaba mar ay wakaalada wararka ee ONA ku booqatay dhibanahan guriga uu kaga nool yahay xeryaha qoxootiga ee Dhadhaab ayuu Maxamad noo sheegay in ay ciidamada gumaysigu qabteen isagoo geel kula jooga meel u dhawa dagmada Yoocaale ee gobolka Jarar. Wuxuu sheegay in ay ku sameeyeen jidhdil ba’an. Wuxuu yidhi dhibane Maxamad oo u waramayay ONA; “Way i figeeyeen waxayna madaxa igasaareen dhagax wayn kadibna way igaraaceen.”
Sida ka muuqata wajiga Maxamad waxaa badalmay muuqaalkiisii, waxaana saad aragtaanba maqan quruxdii wajigiisa oo uu Maxamad sheegay in xiligii jidhdilka lagu sameeynayay ay soo gaadheen nabaradan badalay guud ahaan wajigiisa.
Dhinaca kale Maxamad wuxuu naafo kanoqday afka oo sida ka muuqataba uu ku yaalo nabar wayn oo xataa hadalkiisii dhaawac u gaystay. Dhibane Maxamad oo dhawaan uun soo galay xeryaha qoxootiga ee Dhadhaab ayaan wax kawaydiiyay xaaladiisa nololeed ee haatan marka laga tago in ay ku yaalaan dhaawacyayad ay ciidamada gumaysiga ku soo gaadhsiiyeen Ogadenia wuxuuna ii sheegay in uu helay nabad galiyo laakiin uuna wax caawimaad ah ka helin hay’adaha ka howl gala wadanka Xeryaha qaxootiga ee wadanka Kenya.
Sikastaba ha ahaatee Maxamad oo kaliya ma aha dadka jidhdilka loo gaystay ee qoxootiga ku ah xeryaha Dhadhaab iyo guud ahaan wadanka Kenya oo ay ku nool yihiin kumanaan ka soo cararay gumaysiga Itobiya ee Ogadenia haysta oo qoxooti ku ah dalalka dariska la ah.
Dadka xeryaha soo galaya waxay sheegayaan in dhibaatada shacabka lagu hayo ay sii korodhay intii ay soo galeen dalka nimankii lalahaa waa wadaado ee heshiis la galey Itobiya, taasoo ay ku macneeyeen inay tahay colaad ay u hayaan shacabka.
FG. Qofkii doonaya inuu caawiyo muwaadinkan dhibaataysan hakala xidhiidho Wariyaha ONA Cabdulqaadir Sheekh <moodhar@yahoo.com>;
FG. Waxaa wakaalada ka soo gaadhay Jigjiga warar kala duwan oo sheegay qorshe ey isla wadaan Ibraahim dheere iyo Cabdi iley. Wararkaa oo ku saabsan sidii loogu samayn lahaa dacaayad gacan ku-dhiiglayaasha u heshiiyay dhiiga shacabka ee kala ah jenera Abraham Wolde iyo Cabdi iley. Arimahaa oon xog dhab ah ka hayno ayaan idinla socodsiin doonaa meesha ay u mareyso.